Addis ababa oo Hubkii ugu badnaa lagu Qabtay. | ogaden24
Addis ababa oo Hubkii ugu badnaa lagu Qabtay.
Nov 6, 2018 - Aragtiyood
Badhtanka magalada Addis ababa ee xarunta dalka Itobiya waxaa Galinkii dambe ee shalay lagu Qabtay Gaadiid Nooca xamuulka Qaada ah (Booyad) oo Hubka culus iyo Rasaas aad u Tira badan lagu soo Raray.
Hubkan oo Hay’adaha Amaanku si kooban uga Hadleen ayay sheegeen inuu kasoo Galay dalka dibadiisa waxayna ka Gaab-sadeen inay Faah Faahin kabixiyaan kuwa ay yihiin dadka Hubkani soo Galiyay iyo sababta kadambaysa.
Arinta Yaabka kudhalisay dadka Itobiyank ah ayaa ah in Hubka xadigaas leh ee kasoo Galay dalka dibadiisa uu soo dhaafo in kabadan 100- Kaylaa ama is baaro oo ay Joogaan ciidamada Amaanka.
Guud ahaan dalka Itobiya Gaar ahaan Gobolada Axmarada, Oromada, Gambelaha Beni-shangulka iyo magalada Addis ababa, waxaa 4-tii bilood ee ugu dambaysay si Joogta ah loogu Qabanayay Hub kala duwan iyo Rasaas tira kuwaasi oo aanay jirin cid ilaa iyo Hada sharciga loo Horkeenay.
Kadib Qashadii Hubka iyo Rasaasta ee maalinimadii shalay ahayd ayaa waxaa lagu dhawaaqay sharci lagu Ladirirayo Hubka sida sharcidarada ah dalkaasi ku Galaya oo u muuqda mid Faraha kabaxay, waxaana sharcigaasi lahorgayn doonaa Fadhiga ugu Horeeya ee Barlamaanka Itobiya si ay u meel mariyaan.